ရဟန်းရှင် လူပြည်သူများနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ခင်ဗျား | ဒီရေ
ရဟန်းရှင် လူပြည်သူများနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ခင်ဗျား
ကျနော်၊ ကျမနော်တို့ Generation Wave ( မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး )သည် ယနေ့ ၁၉ရက် ဇူလိုင် ၂၀၁၀ နေ့ တွင်ကျရောက်သော (၆၃) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ တွင် ကျဆုံးလေပြီးသော ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်မျာအား ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် နအဖ၏ မတရားမှုများအား ဆန့်ကျင်သည့် အနေဖြင့် "မျိုးဆက်လှိုင်း" အမည်ရှိ ကဗျာ စာစုများအား ရေးသား ဖြန့်ဝေ ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဗျာ စာစုများ ထဲတွင် န.အ.ဖ ၏ မတရား ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်မှု များအား ခေါင်းငုံ့ ငြိမ်ခံ မနေပဲ ရဟန်းရှင် လူပြည်သူများနှင့် လူငယ်ထု အကြား တော်လှန်ရေး စိတ်ဓါတ်များ နိုးကြား လာစေရန် အတွက် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ရဟန်း ရှင်လူ ပြည်သူများနှင့် လူငယ်များသည်လည်း န.အ.ဖ ၏ မတရား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု အား ခေါင်းငုံ့ ငြိမ်ခံမနေပဲ ကျနော် တို့နှင့် အတူ တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ကြပါဟု လေးနက်စွာ တိုက်တွန်း နှိုးဆော် အပ်ပါသည်။
Dear Respected Monks, & all the nationalities throughout Myanmar,
In memory and dedication of Bo Gyoke Aung San and other independence leaders on the 63rd anniversary of Martyrs' Day on July 19,2010, our organization,Generation Wave,distributed poem booklets named "Myo-Sat-Hlaing (Generation Wave )" inside Myanmar in order to oppose unjust acts of the military government towards the public.We aim to alert the public especially monks and youths to go against the government's ruthless oppression instead of keeping silent.
Hence,we deeply encourage all the Myanmar people including monks and youths to cooperate with us in our pro-democracy activities.
(မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး)
_ကျေးဇူးပြု၍ ပူးတွဲပါ ဖိုင်အား ဖွင့်ကြည့်ရန် ရည်ညွှန်းအပ်ပါသည်။
_Please see the attach file for your reference.